Bangaphi abantu baseDatshi abanokuhlawula amatyala abo ngexesha lentlekele ye-corona? : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	21 Meyi 2020	• 16 Comments
Ukuba ulandela iindaba zosasazo, akukho ngxaki eNetherlands ngaphandle kwale ntsholongwane ye-corona, esele ivumba njengebhombu yexesha lokukhonkotha. Buphi ubuntatheli xa kufikwa ekubonakaliseni ukubandezeleka kwabantu emva kweminyango yangaphambili yabaninzi? Akunjalo ukuba nzima ukuhlalutya amanani e-RIVM kunye nokuqaqambisa amacala amabini. Imithombo yeendaba ephambili ikhusela umgaqo-nkqubo weRutte & Co. noJensen othi ayimbi kangako. It ishedyuli yexesha elide Kukuba kuphinde kubekho olunye uvuselelo emva koko kugqitywe imeko yamapolisa kwaye yonke into naye wonke umntu ogxekayo uyakucaciswa. Kodwa kutheni kungekho mntu unikela ingqalelo kubuntu nakwiimali?
Ngokuziqhelanisa, zonke ezo phakheji zithembisayo zenkxaso ziya kuba ngumbuzo wezinto zokubala, apho uya kuthunyelwa khona ukusuka kwi-counter A ukuya kwi-counter B. Ngokukodwa, i I-433.000 freelancers iya kuba yi-spool, kuba inkxaso yabo ye-TOZO ukusuka nge-1 kaJuni iya kuvavanywa ngokuchasene nengeniso yeqabane kwaye ke iphele kwaye iphindaphindeke. Kwaye nokuba ufumana inkxaso, uninzi (kubandakanywa nabantu abangazisebenzisiyo) banokufumanisa ukuba ukuwa komvuzo omncinci kunokuba yintlekele ekuhlawuleni irente. Urhulumente ubona ukuba le ngxaki izele, ke icebo yayikukuseta irente yokuqeshisa okwethutyana, kodwa oko sele kunjalo Kajsa Ollongren isusiwe.
Yile ndlela iqhubeka ngayo kwezopolitiko: umgca obomvu sele usekwe, kodwa wenza okuthile ngathi 'singawo' okanye 'sichasene nawo'. Eso sisikhohlisi sedemokrasi esiphila phantsi kwayo. U-Ollongron uthi indawo yokumisa irente yenzelwe amashishini kuphela, ngoba banemali encinci yokutyala imali kulwakhiwo olutsha. "Ikhabhathi ikhetha ukunika abanini-ndawo ithuba lokubonelela ngezisombululo ezizizo. Umzekelo, banokunikezela kubaqeshisi ekuhlawuleni intlawulo, bacime inxenye yerente emva koko banciphise irente, ”utshilo uKasja. I-Ollongren ikwafuna ukwenza kube lula ukwehlisa irente okwethutyana. Umthetho oyilwayo omtsha ongena ekusebenzeni kamva nawo wenza oku kwenzeke.
Omnye umthetho. Imithetho ibhabha ngeenxa zonke ezindlebeni zethu, kodwa ngokuziqhelanisa ihlala isenzelwa imibutho yezindlu ukunciphisa irente. Kwaye baya kukwenza oko ngentumekelelo enkulu (hayi).
Ewe, iingxaki zokwenyani zikwabantu abangakwaziyo ukuhlawula kwakhona kwaye banokuba yinyanga enye okanye ezimbini ngasemva. Asazi kuba akukho mntu uwenzayo uphando. Ufuna ukugcina ukubandezeleka kuluntu phantsi kwekhaphethi njengombuso. Ukuncitshiswa kwerenti kuyinto entle, kodwa wenzani ngokuchasene neearhente zokuqokelela ezingenakuchazwa kunye nee-bailiffs ezibeka iimali ezinkulu kwiiakhawunti ezingaphezulu kwemali? Amatyala erenti yenyanga anokukhokelela ngokukhawuleza kumakhulu euros kwiindleko ezongeziweyo, ukuze uwele nangaphaya emva kwenyanga ezayo.
Ke kukho ukuphendula okuthe xhaxhe kwiingxaki, apho ungena khona unemali eninzi, oku kungakhokelela kukhathalelo lolutsha ukuba luze nokuthatha ujonge ukuba ingaba abantwana bakho abanakho na ukubekwa lusapho oluqinisekileyo, ngenxa yokuba akusekho babanakekele.
Ukuba ukuhla kwexabiso lemali (ngenxa yeebhiliyoni zeeuros) kuya kuba nefuthe kumaxabiso ezitolo ezinkulu kwaye ukuba ixesha elide lonyuka lirhafu, kuba iipakethi zoncedo kufuneka zibuyiselwe kwenye indawo, nabantu abaninzi bangangena engxakini.
Ewe kukhona nabantu abaqhuba kakuhle. Aba ngabantu abasebenzela le nkqubo nabenza yonke imisebenzi yokubek'esweni kunye nokunyanzelisa. Unokufumana umsebenzi omkhulu njengomhloli we-RIVM, apho uya kuthunyelwa ngaphandle esitratweni ukuya kuvavanya abantu nge-corona okanye ubone ukuba abantu banamathela kwimitha nesiqingatha. Kusenokwenzeka ukuba kukho iifemu zokubonisana ezifumana i-heyday, kuba zikhokela iinkampani kwaye zibacebise ngendlela yokuqokelela inkampani yabo kuluntu oluyimitha enesiqingatha. Abantu abaninzi basebenzela urhulumente, urhulumente woburhulumente okanye iinkampani ezibonelela iinkonzo ezinxulumene noko, abantu abangaphezulu baya kuxhamla ngokulawula nokohlwaya iqela elingasebenziyo kule nkqubo.
Kuya kude kube nini apho amaDatshi aya kufumanisa ukuba apho Niemand Uza kuhlangula? Abantu abasebenzela le nkqubo banokuzijonga njani ngqo esipilini ngaphandle kokufumana iintloni ezinzulu? Ewe, ukuba ungowesininzi, ungaliphumelela ityala lakho ngokudibeneyo kunye neMeiland endaweni yokulwela ilizwe elikhululekileyo. Abantu bazakufumanisa nini ukuba siphila kwidemokhrasi yenkululeko, apho iinkokheli zopolitiko kangangeminyaka emininzi bezisinike umbono ongeyonyani, kodwa ngokufihlakeleyo zilandele i-ajenda ephambili ekufuneka ibambe abantu? Ekuphela kwendlela yokuphuma kule meko inguquko yokwenyani, apho abantu babamba amandla.
Oku kunokwenziwa ngentando yesininzi ngqo. Kwidemokhrasi ethe ngqo, abaphathiswa abonyulwe ngokuthe ngqo ebantwini baxela ebantwini. Batsho ngesininzi ukuba ingaba imithetho iyapasiswa na, umthetho ophambili ngowokuba akukho mthetho ufanele ukujongela phantsi okanye ukuphelisa amalungelo asisiseko kumgaqo-siseko. Ke ngoko, yonke into eyaphula ubumfihlo kunye nomzimba kunye namalungu ayinakungena njengomthetho (nkqu nomthetho ngogonyo olunyanzelekileyo). Idemokhrasi ngqo ingafakwa ngabantu ngokungakhathaleli ezopolitiko ezisisikhundla kunye nokwakha inkqubo entsha ngokwabo. Amakhulu amawaka kufuneka abonise ukuba ayafuna ukwenza oku. Yiyo loo nto kufuneka sivukele kwaye sibonise ukuba sifuna utshintsho. Awungekhe uzuze inguquko yokwenyani ngokukhalaza ngayo yonke into engahambanga kakuhle; uyifezekisa loo nto ngokwenza.
Ke ngoko, nceda ukuvula inguquko yokwenyani. Zibandakanye nentando yesininzi ngqo kwaye wabelane ngale webhusayithi kunye nezikhalazo: www.fvdd.nl
Uludwe lwekhonkco lovimba: bn.nl, telegraaf.nl
Indlela yokujongana neendlela ze-coronavirus (zokutshixa): iingcebiso ezisebenzayo
Ukuvalwa kweCoronavirus: umthetho kaxakeka, umgaqo-siseko kunye nelungelo elisisiseko, into ekufuneka uyazi, into onokuyenza (imigaqo yongxamiseko ayikho mgaqweni)
Awusenakungena esitolo ukuba awuniki gama lakho kunye nenombolo yekhoboka kwikhawuntala kwaye eso sisiqalo nje
tags: intlekele, intsholongwane ye-Corona, eziziimbalasane, zemali, indawo yokuqesha, ukunciphisa irente, iingxaki, rhu lumente, gu qulelo, inkxaso, iiphakheji zokuxhasa, tozo, baqeshwe, zzpers
21 Meyi 2020 kwi-10: 25
Ubalo lwamva nje kuFacebook: usenabalandeli, kodwa awusenako ukuthumela.
Kubonakala ngathi iphepha lam le-Facebook liphelile: Andisakwazi ukuthumela nantoni na kwakhona!
21 Meyi 2020 kwi-16: 48
Kuyacaca ukuba ibilelo ukusilela kwezobuchwephesha okanye basibuyisela umva ..
21 Meyi 2020 kwi-12: 02
Iskena kufuneka kwaye siya kukhuthazwa ngurhulumente / ngeenkonzo zokhuseleko.
Ukutyhileka kwamanyathelo abo angenantsingiselo nawokungenangqondo
Abalindi. Abantu abaqhelekileyo bavunyelwe
abazazi iinyani kwaye akufuneki bacinge. Amalungelo oluntu anyhashwa, kodwa ngubani ke wonke ogrumba kwinkonzo zikarhulumente kunye / okanye abanye abazixhalabeleyo ngenxa yomsebenzi wabo
Ngethamsanqa siphila kwilizwe 'elikhululekileyo'.
Abantu basayina uxwebhu lwezikhalazo ngoku!
21 Meyi 2020 kwi-12: 15
Eyona nto ingaboniyo kukuba le nkqubo ilungiselelwe ukudityaniswa eNetherlands kwiphondo njenge-EUSSR. De facto, sele iphantsi kweliso lePolitburo eBrussels.
I-GDR yayi-harbinger. ukuzama into eza kuqaliswa kwilizwekazi laseYurophu. Ngoku ungabona ngokucacileyo ukuba ngubani olawula eli nqanaba lesiguquli, njengoko watshoyo uJFK, ngumatshini odibanisa yonke into kwaye usebenza kwi "Lock Step".
I-Stasi Merkel, ilungu le-Vestager yeTratu, uVon der Leyen, kunye ne-Timmerfrans babukele ngamehlo kwaye bavuma. Inqanaba lokuqesha le-Stasi entsha (i-Eurogendfor) inokuqalisa kungekudala.
21 Meyi 2020 kwi-15: 26
enkosi Salmon! Udliwanondlebe olulungileyo,
UMongameli uFrance wayenophicotho-zincwadi oluphambili olucacileyo.
YADALWA (umzuzu we-6; 19 ayinayo i-Gulag ayinayo i-KGB “nangoku”)
Imizuzu emi-4; 03 indlela i-Gigscard d'Estain eyazi ngayo
21 Meyi 2020 kwi-19: 52
wamkelekile Ikhamera! YayikwanguMacron owacela umngeni kwi-Eurogendfor ngokuchasene nentshukumo "ye-yellow vests" eyalelweyo. Emva kwayo yonke loo nto, kukuvavanywa kovavanyo ...
21 Meyi 2020 kwi-15: 53
ikamva, ugxininiso kunye nokuguquguquka (fff = 666)
Umzekelo, amanyathelo abalulekileyo athathile kwintsebenziswano phakathi kwe-EUROGENDFOR kunye ne-CSDP yaseburhulumenteni, kwaye isicwangciso sokunxibelelana senziwe ukuphucula ukubonakala kwe-EUROGENDakuti.
Kulo nyaka, iingcinga eziphambili zexesha elizayo, ukugxila kunye nokuguquguquka kuya kubonakala kwiinjongo esizibekele zona.
Enye yezi njongo, kwaye ebaluleke kakhulu, kukuchaza iimeko zekamva ze-EUROGENDFOR.
Oku kuthetha ukuba kufuneka sijonge kwintsebenzo yommandla kunye nokusebenzisana namaqela angaphandle kwe-EUROGEND kinga, njengamaqabane oluntu kunye nabaphathi bengingqi.
Ukusebenza kunye kusivumela ukuba sifunde omnye komnye.
Kulo nyaka, iNetherlands ikongamela uMbutho wamazwe ngaMazwe weGendarmeries kunye namaPolisa oMkhosi wamaPolisa oMkhosi wezobuGcisa (i-FIEP) kunye ne-European Union Police kunye neNkqubo yoQeqesho lweeNkonzo zoLuntu (i-EUPCST).
Siza kuvavanya ukuba singakwazi na ukudibanisa unxibelelwano phakathi kwale mibutho kwaye sivavanye indlela yokuxhasana ngendlela eyiyo.
Okwalo nto inokwenzeka unxibelelwano ne-FRONTEX lunokusekwa.
La maqela abalulekileyo kufuneka aguquke kwaye akulungele ukusasaza ngokukhawuleza kwiimeko zentlekele. Kufuneka babandakanye izakhono ezizodwa ezifunekayo kwiimeko zokusasazwa kwexesha elizayo kwe-EUROGENDakuti.
Ngale ndlela sinokuthi siphendule kwizisongelo zeli lizwe nakwimiceli mngeni ngokufanelekileyo.
Kuya kubakho imfuno engaphezulu yoku oku kwixesha elizayo.
Namhlanje, iikhonsepthi eziphambili zexesha elizayo, ukugxila kunye nokuguquguquka (fff = 666) zibaluleke ngakumbi kunangaphambili.
22 Meyi 2020 kwi-12: 40
INGXELO: Ukucwangciswa kwepasipoti yokugonyelwa i-EU ukusukela ngo-2018
"Imephu yendlela yokugonywa" icacisa isicwangciso seminyaka emi-3 sokukhulisa "ukuzitofa kokuzithemba" kunye nokuqhubela phambili "ukulandela umkhondo nge-elektroniki"
21 Meyi 2020 kwi-12: 45
Kule minyaka idlulileyo, uninzi luye lwalala kwaye lubilisiwe kwii-suds zazo apho kunzima khona ukucinga ukuba isisombululo esisebenzayo siya kufumaneka ngexesha kwinto esele yenziwe amashumi eminyaka phambi kwamehlo abo.
Kungcono ukugxila kwisizukulwana esiya kuba nzima kakhulu sesi sifo. Ngokufanelekileyo isizukulwana Z, abafundi abanamatyala ngaphandle kokujonga.
21 Meyi 2020 kwi-13: 51
… Bade babe kumnyango wakho wangaphambili:
UDe Jonge: 'Ukunyanzelwa kokuvalelwa kumgaqo-nkqubo omtsha wovavanyo ngaphandle.'
Ukuba ezo nguqu azitshintshanga, urhulumente ubonile:
21 Meyi 2020 kwi-14: 16
UPalantir uthatha ezinye izivumelwano ze-COVID-19, ngeli xesha ineVA
I-Apple kunye ne-Google yazisa i-API yesaziso sokubonisa, eyenza ukuba abasemagunyeni bezempilo bakhulule ii -app
22 Meyi 2020 kwi-00: 40
Nanga amanyathelo ali-10 ofanele uwasebenzise, ​​ukuba ufuna ukuguqula intsholongwane engalunganga ibe kukubamba kwamandla ehlabathi
1. Qala ngentsholongwane echazwe gwenxa, yongeza uvavanyo olungachanekanga kuyo, kwaye ukhuthaze abantu abaninzi abagula kakhulu okanye abagula kakhulu ukuba baphinde bavavanywe bade bavavanywe ukuba banayo.
2. Chaza amabango akho okusweleka aphakame kakhulu kwaye ungaqiniseki malunga nokuba aba bantu baswelekile yile ntsholongwane okanye bamane nayo.
3. Yenza 'impendulo' kwintlekele 'ekhupha uthungelwano olukhulu lwamanyathelo amagunya, ezinye zazo beziceba ixesha elide, kwaye ligcuntswana kuphela apho kunakho nasiphi na isicelo sokuthintela ubhubhane. (Qinisekisa ukuba urhoxisa unyulo kude kubuye kufikelelwe kwisaziso kunye nokonyusa amandla wamapolisa okubanjwa kunye nokuhlolwa)
4. Tsiba izibhedlele zakho kuzo zonke kodwa 'iimeko ezingabinamali'. Ukurhoxisa utyando lokhetho, ukuhanjiswa kweentso, unyango lomhlaza, ukubonisana nge-GP eqhelekileyo kunye nabo bonke “kwezonyango”. Yiyo loo nto ukwanda okungunobangela wokufa.
5. Guqula imithetho yakho ngeendlela ezininzi zokuvumela phantse zonke ezi zinto zokufa zigqithile ekutshekisheni iitsheki eziqhelekileyo kunye nokulinganisa kwaye zifumaneke ngokulula njenge- "covid-19", nokuba luvavanyo oluchanekileyo okanye ngokulula 'ngokuboniswa kliniki'.
6. Kwimeko apho abanye abezonyango beyekelela ukulandela oku, batshintshe umthetho ukuze kuvunyelwe i-MD enye, ekunokwenzeka ukuba ayikaze imbone isiguli ekuthethwa ngayo, ukuba ifumanisa ukuba inesifo se-covid19 ngokubona kwakhe.
7. Chaza amanani athusayo 'amatyala amatsha' owafumanayo ngenxa yezi ziphumo maninzi, njengobungqina bokuba kubaluleke kangakanani amanyathelo afanelekileyo 'okusindisa ubomi'.
8. Ngaphandle komsindo wokuziswa kokunyanzeliswa Musa ukuVuselela (i-DNR) kuyo nayiphi na inkcubeko yabantu ocinga ukuba ngabasebenzisi abangenanto. (Ukuba ucel'umngeni ekuthetheni malunga nokubandezeleka kwabantu, izibonelelo zokhathalelo lwempilo kunye neefestile)
9. Ungalibali ukongeza nakuphi na ukubhubha okulandelayo kwinani le-covid19.
Qinisekisa ukuba amajelo osasazo abiza nabani na obuza nayiphi na into 'yeyelenqe lokucinga'.
Lidiya Roosje wabhala wathi:
28 Meyi 2020 kwi-12: 42
23 Meyi 2020 kwi-10: 41
Okuhlekisayo ukuba uyakhankanya martien meiland kwinqaku lakho. Kudala ndizibuza okomzuzwana ukuba ngaba eli gama lalinyulwa ngononophelo. Inesandi esifanayo negama lakho. Ngaba ingahamba into yokuba le yenziwe yenziwa ngenjongo zokunxibelelanisa igama lakho ebantwini kunye nomlinganiswa ongathathi ntweni uMartien Meiland?
Nditsho ne-crazier; I-meiland ine imibala emibini eyahlukeneyo yamehlo, isiphumo se-chimeric emfanekisweni ...
23 Meyi 2020 kwi-16: 48
Udibaniso lwemali lwe-d'etat ichaziwe, yokomfuziselo kwimidumba:
27 Meyi 2020 kwi-16: 11
dat is nu aan de gang en de geldontwaarding is exponentieel. De eerste schuren zijn zichtbaar in de EU blok, de Duitse Centrale Bank is buitenspel gezet..onhoudbaar dit
EU wil 750 miljard euro extra uittrekken om coronacrisis te bestrijden
Exclusive: ECB prepares for the worst – life without the Bundesbank
« Awusenakungena esitolo ukuba awuniki gama lakho kunye nenombolo yekhoboka kwikhawuntala kwaye eso sisiqalo nje
UMaurice de Hond ufumana umthetho ongenaqingatha kunye neemayile (ividiyo) »
Utyelelo lulonke: 2.491.430
Riffian op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane
SandinG op ICorona Crisis Covid-19 ikhumbuza 2003 i-Bl Blaster yintsholongwane